Banyere Anyị - Ningbo Master Soken Ọdụdọ CO., LTD
Push Button Gbanye
Ningbo Master Soken Ọdụdọ Co., Ltd. bụ a director so na China Ọdụdọ ngwa oru Industry Association banyere eletriki ngwa mma na home njikwa alaka. Anyị bụ ndị ọkachamara na-eme nnyocha na-emepe emepe, emebe na-amị iche iche iche iche nke switches. Anyị na ngwaahịa mbio na rocker switches, rotary mgba ọkụ, push-button switches, isi switches na egosi ọkụ. The ihe na-ọtụtụ-eji ọtụtụ ubi ndị dị otú ahụ dị ka ụlọ ngwa, ulo oru ụlọ ọrụ, nkwurịta okwu equipments, mita na instuments na ahu-ewu ịchọ mma equipments wdg
Anyị ụlọ ọrụ na-dị na ndịda nku nke Yangtze River Delta akụ na ụba agbọghọbịa, ebe bụ ma ama ise A larịị mba mara mma agbaga ebe-Xikou Ningbo. The factory nwere advantaged ebe obibi na nnọọ adaba njem. The factory ewe 16,000 square mita dị ka yad na 25,000 square mita nke uloru. The ụlọ ọrụ nwere ọrụ karịa 1000, gụnyere R & D na technic injinia n'elu 50. ya kwa afọ mmepụta bụ ihe karịrị nde 150 iberibe. Anyị ụlọ ọrụ bụ nke mbụ larịị nke anụ ụlọ craft ụmụnna.
Anyị ụlọ ọrụ gafere ISO19001 quality management usoro ke July, 1997 na passeded ISO14001Environmental management usoro ke October, 2004. The usoro ibu ihe zuru okè na Ceaselessness usoro PDCA cycles. SOKEN ka ika, ọ bụ Zhejiang ama ika na Ningbo ama-ika ngwaahịa. The ụlọ ọrụ wuru laabu dị ka Mankeumman TUV nnyocha ọkọlọtọ. Kasị nke ngwaahịa ọbọ Mankeumman, VDE, TUV, ENEC, KEMA, K, CQC, CCCD nchekwa nkwado na asambodo na RoHS-Dabara.
The ụlọ ọrụ ga-anọgide na-etinye onwe ya na management uche "àgwà na ọrụ" na-achụso rụọ ọrụ ndị okè nke àgwà na oké ọrụ. Anyị na-atụ na-agbalị kasị mma anyị ka afọ ju anyị ahịa 'choro na a maximal ogo.